Nọmba Aymara sitere na 1 ruo 100: ka esi ede ha - UniProyecta
N'edemede taa, anyị ga -abanye ma mụta ntakịrị ihe Asụsụ Aymara, nke a makwaara dị ka Aymara, nke ndị Bolivia dị iche iche na -asụ, yana ndị ọzọ mba Latin America siri ike dịka Argentina ma ọ bụ Chile. N'oge a, anyị ga -egosi gị ọnụọgụ Aymara dịkọrọ ndụ, dịka ụfọdụ ndị ọkachamara na -ekwusi ike na ọnụọgụ ha abụghị otu a.
Agbanyeghị na ị nwere ike bido site n'ịmụ nọmba nke ọ bụla site na 1 ruo 100 n'otu n'otu, ihe kachasị mma ịme bụ ịmụ ka esi ewulite ọnụọgụ. N'ụzọ dị otu a, ọ dị mfe ịmụta ọnụọgụ ọnụọgụ niile dị na Aymara nke ọma. Dịka anyị ga -eme na usoro ọnụọgụ ọ bụla ọzọ, ihe mbụ bụ ịmụta ọnụọgụ site na 0 ruo 9:
N'ihe gbasara efu, enwere ụzọ dị iche iche esi akpọ ya:
0 ch 'eji
0 Muruq u
Ugbu a nọmba site na 1 ruo 9:
1 ndị Maya (Mä)
Ihe kpatara ya Maya y Paya nwere variants mma y pä ewezuga bụ n'ihi na a na -eji ihe ndị a mgbe ọnụọgụ ahụ na -arụ ọrụ dị ka ọnụọgụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị asị "nkịta", anyị ga -asị "ma anụ”. N'ihe gbasara iri, narị na puku, a na -ekwu ha dị ka ndị a:
Nke a bụ vidiyo anyị kwadebeere gị ka ị nwee ike ịnụ mkpọpụta akpọrọ:
Akara nọmba Aymara dị nnọọ iche, yabụ ịghọta ya adịghị mfe dị ka asụsụ ndị ọzọ. N'iburu n'uche ọnụọgụ ọnụọgụ ọdịda anyanwụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ikwu 43, dịka ọmụmaatụ, anyị ga -agbari ya n'ime iri na nkeji dị ka ndị a:
43 = iri iri + 4 otu = 3 · 4 + 10
Na nọmba Aymara iri bụ iri tunka, otu narị otu narị pataka, puku ikike na nde nde, ya mere anyị ga -abịa na nkwubi okwu a:
Mgbakwunye ni a na -eji ya mgbe enwere nkeji, nke fọdụrụ na -abụ otu. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ahụ dị otu narị ma ọ bụ iri, a gaghị asị mä pataka ma ọ bụ mä tunka, mana na nke a naanị pataka na tunka ka ekwesịrị ikwu. Cheta na nke a bụ naanị mgbe anyị na -ekwu maka iri iri, narị otu narị ma ọ bụ puku.
Iji chịkọta iwu nke ni, ka anyị kwuo na enweghị ike iji ya rụọ ihe ọnụọgụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na enwere nkeji ma ejiri ya, a ga -emerịrị ya na njedebe, ị gaghị eji ya na mbụ.
Ọnụọgụ dị na Aymara nwere ike ịgụta ọtụtụ narị ijeri, n'agbanyeghị eziokwu bụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu dị otú ahụ abaghị uru maka Aymara nke oge a.
Ọ bụrụ na ị ghọtaghị iwu iwu ụlọ ahụ nke ọma, mgbe ahụ ị ga -ahụ tebụl nwere nọmba niile sitere na 1 ruo 100:
Otu esi ede nọmba na Aymara site na 1 ruo 100
4 etinyere m
14 tunka pusi
20 ntụ ọka
37 ngwa ngwa
70 nke ọma
80 ihe ịga nke ọma
Ma nke a bụ maka taa, anyị na -eche gị n'isiakwụkwọ na -esote webụsaịtị a, ebe anyị ga -amụta ihe ọhụrụ, dịka anyị na -eme kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị chọrọ, Ị nwere ike tụọ isiokwu ị ga -ekwu maka ya n'okpuru ebe a na nkọwa? anyị ga -eburu ya n'uche maka mbipụta ndị ga -abịa n'ọdịnihu.
Nọmba n'asụsụ Portuguese site na 1 ruo 100
Inicio » omenala » Nọmba Aymara sitere na 1 ruo 100
5 kwuru na "Nọmba dị na Aymara site na 1 ruo 100"
November 11, 2018 na 3:44 pm
Abụọ 16, 2019 na 4:17 pm
Daalụ maka enyemaka
Abụọ 21, 2019 na 11:58 pm
Daalụ, emere m ọrụ ụlọ maka ibe weebụ a
Machị 9, 2019 na 12:37 am
Daalụ, ọ nyeere m aka nke ukwuu ☺😆😆😆😊
October 15, 2019 na 9:25 pm
Amaghị m ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịme ọrụ ahụ ma na Aymara ma n'asụsụ Spanish